ဒီဇိုင်းသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏အသံတိတ်သံတမန်ဖြစ်သည် Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 5, 2021 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 5, 2021 Anas Hassan ဖြစ်သည်
အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဒီဇိုင်းသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်သာလွန်နိုင်သည်။ အရ ဒီဇိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအင်စတီကျုဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်သောကုမ္ပဏီများသည် S&P အညွှန်းတွင်အားနည်းသောဒီဇိုင်းများဖြင့်အခြားကုမ္ပဏီများကို ၂၁၉%အနိုင်ယူသည်ကိုတွေ့ရသည်။
သို့သော်ငြားလည်း, Tyton Media ၏စစ်တမ်း တစ် ဦး ချင်းစီ၏ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်း၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏အသံတိတ်သံတမန်အဖြစ်ဒီဇိုင်းကိုစဉ်းစားခဲ့သောနာမည်ကျော်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ Paul Rand ၏စိတ်ကူးနှင့်မကိုက်ညီပါ။
ထို့ပြင်ဒီဇိုင်းသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်တသမတ်တည်းဆက်စပ်မှုကိုဖန်တီးပေးပြီးသင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းကတည်မြဲတဲ့အထင်အမြင်တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့လိုတယ်။ ဒီဇိုင်းကဝင်လာပြီးမင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေဒါမှမဟုတ်ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းတွင်စာလုံးပုံစံများ၊ အရောင်အစီအစဉ်၊ ဆွဲချချိန်နှင့်မိုဘိုင်းလ်အဆင်ပြေသောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။ ဤအချက်များကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့အသွားအလာပိုရရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းကိုတိုးစေနိုင်သည်။
လူတစ် ဦး ၏မျက်လုံးများသာလိုအပ်သည် 2.6 စက္ကန့် Missouri သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ရန်နိဂုံးချုပ်သည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဒီဇိုင်းသည်သူတို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နဲ့သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မူတည်ပြီးမင်းကုမ္ပဏီအကြောင်း [ခံစားချက်] တွေရှိတယ်။ ကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလိုဂိုနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်သောကြောင့်ယုံကြည်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောသန့်ရှင်း။ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရန်အာရုံစိုက်လိုလျှင်၎င်းသည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုသုံးခြင်းသည်မည်သို့သောအချက်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အလွတ်တန်းအနုပညာဒါရိုက်တာ Adriana Marin
ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသည်သင်၏သတင်းကိုဆက်သွယ်ရန်ကူညီပေးသည်၊ စျေးကွက်စကားဝိုင်းမှဖြတ်ရန်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုဆွဲယူပြီးသင်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေသောတိကျသောစျေးကွက်အတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုအထိရောက်ဆုံးစီစဉ်ပေးသည်။ ထိရောက်သောဒီဇိုင်းနှင့်စာတိုပေးပို့မှုသည်သင့်လုပ်ငန်း၏တန်ဖိုးကိုတရား ၀ င်ဖြစ်စေရန်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာအမှတ်ရစရာဖြစ်သည်။
Harcum ကောလိပ်မှဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအထူးကု Lilian Crooks
ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၌သာကန့်သတ်မထားပါနှင့် လိုဂိုမရ။ ထုပ်ပိုးမှု (သို့) ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကိုကောင်းစွာအာရုံစိုက်ရန်လိုသည်။ မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကမင်းသတင်းကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါ၊ မင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသတ်မှတ်ပြီး၊ မင်းရဲ့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုစွဲဆောင်နိုင်ရင်မင်းကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ဒီဇိုင်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ ပျက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါကသင်သည်ပြိုင်ဘက်များအကြားတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားဖွယ်ရှိသည်။ လူတွေဟာခေတ်မီပြီးစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို ဦး တည်နေတယ်ဆိုတာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ဘူး။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်ခေတ်မီထုပ်ပိုးမှုတို့ပါ ၀ င်သောတိကျသောထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ လူတွေဟာအလှအပအတွက်ဘက်လိုက်တဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရှိတတ်တယ်။
လူသားတို့သည်ဆွဲဆောင်မှုဘက်လိုက်မှုရှိသည်။ သူတို့ကပိုကောင်းသလားမခွဲခြားဘဲလှပတဲ့အရာတွေကိုပိုကောင်းတယ်လို့ငါတို့မြင်တယ်။ အခြားအရာများအားလုံးညီမျှသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လှပသောအရာများကိုနှစ်သက်ပြီးလှပသောအရာများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ သဘောသဘာဝအတိုင်း function သည်ပုံစံအတိုင်းလိုက်နိုင်သည်။
Steven Bradley၊ စာရေးဆရာ ဒီဇိုင်းအခြေခံ
ထို့ပြင်လေ့လာမှုတစ်ခုက ၅၀ မီလီစက္ကန့်အတွင်းအမြင်အာရုံကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းကဘယ်သူလဲ၊ မင်းဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့အဲဒီစက္ကန့် ၅၀ စက္ကန့်အတွင်းမှာအာရုံကိုဖမ်းစားဖို့လိုတယ်။
အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်နားလည်လိမ့်မယ်။ ခန္ဓာဗေဒ နှင့် ကျောက်တံတား.
Cetaphil သည်ရိုးရှင်း။ အရောင်အစီအစဉ်နှင့်ပျော်စရာထုတ်ကုန်အမည်များကို သုံး၍ လေးနက်သောအသံကိုသတ်မှတ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ထုတ်ကုန်နှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြသရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော် Anatomicals သည်ဟာသထုတ်ကုန်အမည်များနှင့်စာလုံးအကြီးအမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်သည်။
၎င်းတို့သည်တက်ကြွသောအရောင်များကို သုံး၍ ပေါ့ပါးသောလေသံကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ သင်၏ဖောက်သည်များအားသင်ထုတ်လွှင့်လိုသောအဓိကအချက်များကိုလည်းအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့သည်သင်၏ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းတွင်ထင်ဟပ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။
Google သည် cursive font (သို့) ပန်းရောင် McDonald's logo ကို သုံး၍ ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုပြသသည်ဟုသင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ပါသလား။ အဲဒီအပြောင်းအလဲတွေကိုစဉ်းစားဖို့ခက်တယ်ဆိုတာငါတို့နားလည်ပါတယ်။
Google ၏အပြင်အဆင်နှင့် McDonald's logo သည်ဒီဇိုင်းဒြပ်စင်များထက်ပိုများသည်။ သူတို့သည်သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အမှတ်တံဆိပ်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု၏စံနမူနာကောင်းများဖြစ်သည်။
အများဆုံးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို ဦး တည်စေသောအမှတ်တံဆိပ်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကွဲလွဲနေသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသည်ဖရိုဖရဲ၊ ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးနေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏လုပ်ငန်း၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေပြီးအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။
ထို့ပြင်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်၏ကုမ္ပဏီ၏အများပိုင်အမှတ်အသားအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပရိသတ်အားဆွဲဆောင်ရန်သင်၏ကုမ္ပဏီ (သို့) လုပ်ငန်း၏အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းများကိုဖော်ပြသင့်သည်။
ထို့ပြင်သင်၏လိုဂိုကိုမှားယွင်းစွာသုံးခြင်းသို့မဟုတ်၎င်း၏အရောင်များကိုလျော့ရဲစွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မကိုက်ညီခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ လူတွေဟာကွဲလွဲတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုမေ့လျော့နေလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့အကြောင်းပြောတဲ့အခါအရောင်ဒါမှမဟုတ်သင်္ကေတတစ်ခုကိုစဉ်းစားလို့မရဘူး။
ဥပမာအားဖြင့်ပြောတဲ့အခါ ကိုကာကိုလာ၎င်း၏လိုဂို၌အနီရောင်ရှိသည်ကိုသင်မြင်ယောင်နိုင်သည်။ သင်ဖြတ်ကျော်လာသောအခါ Nike က လိုဂို၊ သင်၎င်းကိုဖိနပ်သို့မဟုတ်အ ၀ တ်အထည်ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ ဦး တည်သောပရိသတ်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အရောင်များကိုမတွဲနိုင်ပါ၊ သို့မဟုတ်၎င်း၏လိုဂိုကိုမမှတ်မိလျှင်၊ သင်ဒီဇိုင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကို၎င်းအားလွယ်ကူစွာမှတ်မိစေရန်၎င်းကိုတသမတ်တည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပေမည်။
အသုံးပြုသူအတွက်အဆင်ပြေစေသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းဖြင့် Garner ဖောက်သည်ယုံကြည်မှု
လူအချို့က၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ ထို့ကြောင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အရွက်၏အထင်အမြင်သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကောင်းမွန်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းသည်သင်၏ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုသူများကိုရေရှည်တည်တံ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
ဒီဇိုင်းဆိုးရွားသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်အချိန်ကြာကြာစိတ်မ ၀ င်စားကြပါ။
ညံ့ဖျင်းသော interface ဒီဇိုင်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏အလျင်အမြန်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နောက်နေ့ ... "
CrazyEgg၊ ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းကောင်းကတကယ်အရေးကြီးလား။
ဤ အိန်္ဒိယအလယ်ပိုင်းရှိခေါင်မိုးကန်ထရိုက်တာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၎င်းတို့၏ site ဟောင်းမှအရည်အချင်းပြည့်မီသောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ကိုမရခဲ့ပါ။ ဆိုဒ်အသစ်၊ ဒီဇိုင်းနှင့်တီထွင်ထားသော Highbridge စတင်ချိန် မှစ၍ လစဉ်အရည်အချင်းပြည့်မီသောခေါင်းဆောင်တစ်ဒါဇင်ကျော်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုအညွှန်းများ၊ အစစ်အမှန်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့်လူပြောစကားသည်ကမ်းလှမ်းသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသံသယမ ၀ င်ဘဲဧည့်သည်များကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောသည်။
ဆွဲဆောင်မှုရှိသောထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းနှင့် ၀ ယ်ယူသူများ
သင်၏ထုတ်ကုန်များ (သို့) ကုန်ပစ္စည်းများ၏ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းသည် website ဒီဇိုင်းနှင့်အတော်လေးဆင်တူသည်။ မင်းရဲ့စားသုံးသူတွေကကုန်ပစ္စည်း (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးပြီးထုပ်ပိုးမှုအခြေအနေနှစ်ခုလုံးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရတယ်။
ထိုမှတပါး, Blink - Malcolm Gladwell ၏စာအုပ် ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းသို့ထပ်တိုးခြင်း (သို့) အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ခြင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၀ ယ်သူ၏အမြင်ကိုပုံဖော်ပေးနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်သူတို့ကထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ပေါင်းစပ်မှုအဖြစ်ယူဆကြတယ် ထုပ်ပိုး နှင့် ထုတ်ကုန်။
မင်း 15 UP ထုပ်ပိုးပေါ်မှာအစိမ်းရောင်ကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းပိုထည့်ရင်အချိုရည်ကမထိဘဲကျန်နေခဲ့ပေမယ့်လူတွေကသံပုရာသီးဒါမှမဟုတ်သံပုရာအရသာပိုရှိတယ်လို့လူတွေကပြောကြတယ်။ Chef Boyardee Ravioli ၏ဘူးတစ်ဘူးတွင်တကယ့်လူသားမျက်နှာတစ်ခု၏အနီးကပ်ပုံသည်အပြည့်အ ၀ ရိုက်ချက် (သို့) ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တစ်ခုထက်ပိုသောအရည်အသွေးကိုရိပ်မိသည်။ 'm' သည် ၀ ယ်သူများအားထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုလတ်ဆတ်သည်ဟုထင်မြင်စေသည်။
Joseph Putnam၊ CrazyEgg
ဤဥပမာများသည်ထုပ်ပိုးမှုသည် ၀ ယ်သူ၏အထင်ကြီးမှု၊ အရည်အသွေးနှင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏အရသာကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းပြသသည်။ သင်အနီးကပ်လေ့လာပါက7UP ဥပမာတွင်ဖောက်သည်များသည်တိကျသောအရောင်အသွေးနှင့်မသိစိတ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းသင်းမှုများရှိသည်ဟုဆိုသည်။
ထို့ကြောင့်တွက်ချက်ထားသောဒီဇိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းသည်သင်၏ဖောက်သည်အခြေခံအားသင်၏ထုတ်ကုန်ကိုမြင်နိုင်၊ မြင်နိုင်၊ သိမြင်နိုင်ပုံကိုအထောက်အကူပြုသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကသုံးစွဲသူတွေရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ Logo ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲ
နာမည်ကျော်ကာတွန်းစာအုပ်ဇာတ်ကောင်များစွာသည်၎င်းတို့ပိုင်သည့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ entire တစ်ခုလုံးတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောသူများဖြစ်သည်။ အထင်ရှားဆုံးထဲကတစ်ခုပါ superhero တံဆိပ်များ အဲဒါက Batman ကအားကစားလုပ်နေတာလား။ ပျံသန်းနေသောလင်းနို့၏လူသိများသောသင်္ကေတကို၎င်း၏စစချင်းကတည်းကဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်တံဆိပ်အသစ်ဖြင့်သရုပ်ဖော်ခဲ့သောဇာတ်ကောင်၏စစ်မှန်သောအမှောင်သဘာဝကိုပြသသည်။
Logo ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြင့် Brand Identity ကိုမြှင့်တင်ပါ
မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်မဆိုအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော်လည်းကျွမ်းကျင်ရန်လိုသည်။ များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စိတ်ကူးကောင်းနှင့်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောလိုဂိုဒီဇိုင်း၏တန်ဖိုးကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်ကြသည်။ သူတို့သည်ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသောလိုဂိုများကိုမကြာခဏ သွား၍ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြသည်။
ထို့ပြင်လိုဂိုဒီဇိုင်းတစ်ခုသည်တောက်ပသောအရောင်များနှင့်ထူးခြားသောစာစီစာရိုက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကမင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုထင်ဟပ်ဖို့၊ မင်းရဲ့စီးပွားရေးသတင်းစကားကိုဆက်သွယ်ဖို့၊ မှန်ကန်တဲ့စာလုံးနဲ့အရောင်အစုံရှိတယ်။ ကြီးမားတဲ့လိုဂိုကမင်းရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တန်ဖိုးတွေကိုစစ်မှန်တဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ဖော်ပြတာမှန်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းသော၊ တသမတ်တည်းနှင့်အမှတ်ရစရာလိုဂိုသည်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ မင်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုစဖွင့်မယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ရှိပြီးသားအမှတ်တံဆိပ်ကိုအတိုင်းအတာအသစ်တစ်ခုနဲ့ပေါင်းဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကမင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကို ဦး တည်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်မင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအာရုံစိုက်နိုင်တယ်။
ဥပမာ FedEx ရဲ့လိုဂိုကိုကြည့်ပါ။ လိမ္မော်ရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်အရောင်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်မှုနှင့်တက်ကြွမှုတို့ပါဝင်သည်။ သင်အနီးကပ်လေ့လာလျှင် E & X အက္ခရာများကြားတွင်ပြသောမြှားသည်ရှေ့သို့ရွေ့ရန်ပြောသည်။
Brand Message များကိုအရောင်များနှင့် decode လုပ်ပါ
သင်သတိထားရွေးချယ်ပါကသင်၏လိုဂို၏အရောင်အဆင်းသည်မှန်ကန်သောစိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Louis Vuitton သည်သူတို့၏လိုဂိုတွင်အနက်ရောင်ကို သုံး၍ ၎င်းသည်ပရီမီယံနှင့်ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်စေသည်။
Right Fonts ကိုရွေးပါ
Fonts များသည်သင်၏လိုဂို၏အမှတ်အသားများဖြစ်ပြီးတိကျသေချာသောရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသောဖောင့်များတွင်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်လိုဂိုမှာစာလုံးတစ်လုံးတည်းသုံးတာအကောင်းဆုံးပါ။
သင်၏လိုဂိုအတွက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်သည့်အခါရဲရင့်သောအရာများကိုပုရိသဖောင့်ဟုသတ်မှတ်ပြီး cursive fonts များကိုineတ္ထိဖောင့်ဟုလူသိများသည်။
၎င်းတို့သည်ဂရုစိုက်မှု၊ နူးညံ့မှုနှင့်နူးညံ့မှုတို့ကိုသရုပ်ဖော်ထားသောလုံးဝန်းစာလုံးပုံစံများကို သုံး၍ စဉ်းစားနိုင်သည်။
Shape Effect ကိုအာရုံစိုက်ပါ
BMW Logo ၏ရှင်းလင်းချက်
ဥပမာ၊ မြို့ပတ်ဒီဇိုင်းများသည်အပြုသဘောဆောင်မှု၊ အသိုင်းအဝိုင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ပင်ကိုဆန်သောပုံစံများ (သို့) မာကျောပြီးထက်မြက်သောအနားများရှိသောသူများကခွန်အား၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဟန်ချက်ညီမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုသတင်းစကားပို့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ တြိဂံပုံဒီဇိုင်းများသည်အစွမ်းထက်သော၊ ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျစိတ်ကူးများကိုကူညီပေးနိုင်သည်။
သင်ကအခြားစျေးကွက်တစ်ခုကိုပစ်မှတ်ထားချင်လား။ မင်းရဲ့ရှိပြီးသားထုပ်ပိုးမှုကိုပြန်ပြင်ကြည့်ပါ။ သင်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားသော skin care ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ပါကအမျိုးသားစျေးကွက်ကို ဦး တည်နိုင်သည်။
မင်းရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုအဓိကပြောင်းဖို့မလိုပါဘူး။ ပုရိသလူ ဦး ရေကိုဆွဲဆောင်ရန်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုများကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် Nivea သည်အမျိုးသမီးများအတွက်လိမ်းဆေးများ၊ လိမ်းဆေးများသို့မဟုတ်ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးများအပါအ ၀ င်ကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ထို့ပြင်အမှတ်တံဆိပ်သည်ပိုမိုပြတ်သားပြီးယောက်ျားပီသသောဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု၍ အမျိုးသားလူ ဦး ရေကိုပစ်မှတ်ထားကာသူတို့၏စျေးကွက်ကိုကွဲပြားစေခဲ့သည်။
အဆိုအရ ဒီဇိုင်းကောင်စီ ဒီဇိုင်းအချက်ပေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဒီဇိုင်းအချက်အပေါ်အာရုံမစိုက်သောလုပ်ငန်းများနှင့်ယှဉ်လျှင်အသစ်သောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်ခြေရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အနည်းငယ်စတိုင်ကျသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်ဘယ်မှာရနိုင်မလဲစဉ်းစားပါ။
ဒီဇိုင်းသည်သင်၏လုပ်ငန်း (သို့) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်မှာသေချာသည်။ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စျေးကွက်ရလဒ်များနှင့်မင်းကိုလူအစုအဝေးမှပေါ်ထွက်လာစေခြင်းတို့အပါအ ၀ င်အားသာချက်များကိုယူလာသည်မှာထင်ရှားသည်။
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏သံတမန်တစ် ဦး အနေနှင့်ဒီဇိုင်းသည် ၀ ယ်သူအားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း၊ စျေးကွက်အသစ်တစ်ခုကိုပစ်မှတ်ထားခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်တည်ငြိမ်မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအထင်အမြင်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောလှုံ့ဆော်မှုများစခြင်းနှင့်အခြားအရာများအားကူညီသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အောင်မြင်စေသောဒီဇိုင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခေတ်မီသောဒီဇိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်သင်၏ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။
ထုတ်ဖော်ခြင်း - ဤဆောင်းပါးသည်တွဲဖက်ဆက်စပ်မှုများနှင့်ဖောက်သည်ဥပမာများပါ ၀ င်ရန်တည်းဖြတ်ခဲ့သည် Douglas Karrခိုင်မာတယ်၊ Highbridge.
Tags: Adobeadriana marinခန္ဓာဗေဒအနုပညာဒါရိုက်တာbatman လိုဂိုသမိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုအမှတ်တံဆိပ်အသိအမှတ်ပြုမှုကျောက်တံတားကိုကာကိုလာအရောင်အစီအစဉ်စားသုံးသူယုံကြည်မှုပုံစံဒီဇိုင်းအခြေခံဒီဇိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအင်စတီကျုဒီဇိုင်းသုတေသနဒီဇိုင်းလေ့လာမှုgooglegoogle အမှတ်တံဆိပ်harcum ကောလိပ်lilian လူလိမ်လိုဂိုလိုဂိုအရောင်များလိုဂိုဒီဇိုင်းlogo ပုံစံmcdonald ရဲ့လိုဂိုMissouri သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်Nikeပေါလ် Randထုတ်ကုန်ပုံစံsteven bradleyစာစီစာကုံးtyton မီဒီယာအမြင်ဘာသာစကား
Anas Hassan ဖြစ်သည်
Anas Hassan သည်ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်အေဂျင်စီတစ်ခုတွင်ဒီဇိုင်းအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး ဖြစ်သည် လိုဂို Poppinမရ။ သူသည်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားသည်။ ဒီ့အပြင်သူကဘောလုံးဝါသနာအိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးရံဖန်ရံခါအကင်ညစာစားပွဲကိုနှစ်သက်သည်။